Amandla oBukhosi e-Uganda asaqhoqhobelwe nguHulumeni - Bayede News
Izikhungo zendabuko e-Uganda ziphokophelela amandla okuphatha amaningi, ukusheshisa intuthuko ezindaweni zazo futhi ziphinde zithuthukise izinhlanga. Bakholelwa ukuthi uhlobo lukaHulumeni kazwelonke (Federal Government) ilona oluzosiza kakhulu ekuletheni intuthuko esheshayo kuleli zwe.
Leli lizwe linemibuso emihlanu noBukhosi obuningi. Lezi zikhungo zisiza ekulondolozeni nasekuthuthukiseni amagugu ezwe.
Ngaphambi kokuthi zimiswe ngonyaka we-1966, uHulumeni ubulawula izindaba zawo ngoBukhosi. Kepha ngemuva kokubuyiswa kwazo ngowe-1993 sebefuna kuhlelwe kabusha ezepolitiki.
UNgqongqoshe wombuso iBuganda uDavid Mpanga, uthe aboMdabu base-Afrika banelungelo elaziwa umhlaba wonke lokuzithathela izinqumo.
“Umuntu ngamunye kwaboMdabu base-Afrika unelungelo elikhulu lokuzinqumela emhlabeni jikelele. Sicabanga ukuthi indlela engcono yokuyisebenzisa ngqo futhi ngokugcwele ngokwengqikithi yezifundazwe zamakoloni ezadalwa, ukuba nohlelo lukaHulumeni kazwelonke ongaphansi kwawo, kube nezikhungo zoMdabu ezizobekwa njengezinamandla futhi ezizimele”.
Lolu hlobo lokuphatha luzovumela izikhungo zendabuko ukuthi zikhokhise futhi ziqoqe intela endaweni yazo. Njengamanje amandla azo anqindiwe.
UMpanga uthe okwamanje uHulumeni usalawula umhlaba omningi waMakhosi.
“Ngeshwa, uHulumeni usalawula umhlaba omningi woBukhosi njengoba eyisebenzisa njengezinkantolo, izinkambi zamasosha futhi akayikhokhi irenti. Ngisho sebeyikhokha kuba uhhafu wayo ngesinye isikhathi bakubiza ngokuthi yisinxephezelo noma isibonelelo. Lokhu kudale ukwakheka noma ubunzima ebudlelwaneni ngoba njenganoma yisiphi isakhiwo sidinga imali yokuqhuba izindaba zombuso.”
UHulumeni kazwelonke unokwesaba ukuthi ukunika amandla imibuso ngaphansi kwayo kuzodala ukungezwani.
Abahlaziyi bepolitiki bathi kungase kuthathe isikhathi eside ukuthi kuphele ukubangwa kwamandla phakathi kwalezi zakhiwo noHulumeni.
Anathi Mtaka Mar 26, 2021